UMbusi uShahan wayelele egula, egcinwe egodini lakhe. Ngaphandle, imikhosi yabantwana bayo abane yabhaxabana imfazwe enegazi. Nangona umbusi wayeya kubuya, unyana wakhe wesithathu owawunqobayo wabulala abanye abazalwana waza wabamba umbusi phantsi kokubopha indlu iminyaka eyisibhozo yobomi bakhe.
U-Emperor Aurangzeb we-India kaMughal Dynasty wayengumbusi onobukhohlakali nobukhohlisayo, othe wavusa izinto ezimbalwa zokubulala abazalwana bakhe okanye ukuvalela uyise.
Umntu onobubele ovela njani kwenye yemitshato enothando kakhulu kwimbali?
U-Aurangzeb wazalwa ngoNovemba 4, 1618, unyana wesithathu kaPrince Khurram (oya kuba nguMbusi Shah Jahan) kunye nomkhosana wasePersi uArjumand Bano Begam. Unina ubizwa ngokuba nguMamaz Mahal, "Iintanda ezithandekayo zeNdlu." Kamva waphefumlela u-Shah Jahan ukwakha iTaj Mahal .
Ngexesha le-Aurangzeb yobuntwaneni, nangona kunjalo, ezopolitiki zikaMughal zenze nzima ubomi kwintsapho. Impumelelo ayizange iwele kumntwana omdala; Kunoko, oonyana bakha imikhosi kwaye banomkhosi wokulwa netrone. U-Prince Khurram wayeyintanda yokuba ngumbusi olandelayo, kwaye uyise wayenesihloko esithi Shah Jahan Bahadur okanye "iNkosi yaseBrave yehlabathi" kuloo mfana.
Ngo-1622, ke, xa i-Aurangzeb yayineminyaka emine ubudala, uPrince Khurram wayesazi ukuba unina-nyathelo wakhe wayexhasa umntakwabo omncinci.
Induna yavukela uyise kodwa yahlulwa emva kweminyaka emine. I-Aurangzeb kunye nomzalwana bathunyelwa enkundleni yomkhulu wabo njengamakhoboka.
Xa uyise ka-Shah Jahan efa ngowe-1627, isikhulu sobuvukeli saba nguMlawuli weMbuso kaMughal . U-Aurangzeb oneminyaka elithoba ubudala wahlanganisana nabazali bakhe e-Agra ngo-1628.
I-Aurangzeb esemncinci yafunda i-stecraft kunye namaqhinga empi, iKoran kunye neelwimi, ekulungiseleleni indima yakhe yesikhathi esizayo. U-Shah Jahan, noko ke, wayemthanda unyana wakhe wokuqala, uDara Shikoh, kwaye wayekholelwa ukuba unako ukuba ngumlawuli waseMughal olandelayo.
I-Aurangzeb, iNkokeli yamaMkhosi
U-Aurangzeb oneminyaka eli-15 ubudala wabonakalisa isibindi sakhe ngo-1633. Inkundla yaseH Shah Jahan yayigqoke kwinqanaba, lijonge iindlovu xa enye yezindlovu iphela. Njengoko kwaduduza kwintsapho yasebukhosini, wonke umntu owasasazekayo - ngaphandle kwe-Aurangzeb, ogijime phambili waza waphuma kwi-pachyderm enolaka.
Lo msebenzi wobungqina obusondeleyo wokuzibulala uphakamisa isimo se-Aurangzeb kwintsapho. Ngomnyaka olandelayo, umntwana osemtsha wayethole umkhosi wemikhosi wamahhashi angama-10 000 kunye nama-4,000 esweleyo; Ngokukhawuleza wathunyelwa ukuba ahlawule ukuvukela kweBundela. Xa wayeneminyaka engama-18, isikhulu esincinane saqokwa ukuba sihlukane nesithili saseDeccan, ngasentla kwe-Mughal intliziyo.
Xa udadewabo ka-Aurangzeb efa ngomlilo ngo-1644, wathatha iiveki ezintathu ukuba abuyele ekhaya e-Agra kunokuba abuyele ngokukhawuleza. U-Shah Jahan wayenomsindo ngenxa yokugada kwakhe kangangokuba wathabatha i-Aurangzeb ye-Viceroyalty ye-Deccan.
Ubudlelwane phakathi kwala mabini kwahlahloka unyaka olandelayo, kwaye i-Aurangzeb yaxoswa enkundleni.
Wammangalela ngomsindo umlawuli wothando uDara Shikoh.
U-Shah Jahan wayedinga bonke oonyana bakhe ukuze asebenze umbuso wakhe omkhulu, nangona kunjalo, ngoko ngo-1646, wamisa i-Aurangzeb Gurjarati yaseGujarat. Ngomnyaka olandelayo, i-Aurangzeb eneminyaka engama-28 nayo yathatha ulawulo lukaBalkh ( Afghanistan ) kunye neBadakhshan ( iTajikistan ) kwiphondo elisenxwemeni elisengozini.
Nangona i-Aurangzeb inempumelelo enkulu ekukhuliseni uMughal umntla ngasentshonalanga, ngo-1652, akazange akwazi ukuthatha isixeko saseKandahar (Afghanistan) kwiSafavids . Uyise wakhumbula kwakhona umnqweno. I-Aurangzeb yayingayi kululela e-Agra ixesha elide, nangona-ngaloo nyaka, wathunyelwa eningizimu ukuze alawulwe iDuccan kwakhona.
I-Aurangzeb Imfazwe yeSihlalo sobukhosi
Ekupheleni kwe-1657, uShahan Jahan wagula. Umfazi wakhe othandekayo, uMamtaz Mahal, wafa ngo-1631, kwaye uShahan Jahan akazange alahlekelwe yilahleko.
Njengoko imeko yakhe yaba nzima, oonyana bakhe abane eMamtaz baqala ukulwa nePeacock Trrone.
U-Shah Jahan wayemthanda uDara, unyana oyena mkhulu, kodwa amaSulumane amaninzi ayemjonga njengobuthixo kunye nokungaboni. U-Shuja, unyana wesibini, wayengu-hedonist opheleleyo, owayesebenzisa isikhundla sakhe njengoRhunywa waseBangal njengesigqeba sokufumana abafazi abalungileyo newayini. U-Aurangzeb, umSilamsi obenziwa kakhulu kunabo bonke abazalwana abadala, wabona ithuba lokuba ahlanganisane nabathembekile emva kwebhanner yakhe.
U-Aurangzeb waqhatha umntakwabo omncinane, u-Murad, wamqinisekisa ukuba kunye kunye nabo bangasusa uDara noShuja, kunye ne-Murad kwitrone. I-Aurangzeb idibanise naziphi na izicwangciso zokuzilawula, zifuna ukuba iinjongo zakhe kuphela ukukwenza iHajj eMecca.
Kamva ngo-1658, njengoko imikhosi ehlangeneyo ye-Murad ne-Aurangzeb yathuthela ngasentla ngasentla, uShahan Jahan waphila impilo yakhe. UDara, owayenxibile i-regent, waya eceleni. Abazalwana abathathu abancinci benqaba ukukholelwa ukuba u-Shah Jahan wayephelile, kwaye waguqukela e-Agra, apho bawaxabela khona umkhosi kaDara.
UDara wabaleka ngasenyakatho, kodwa wangcatshiswa ngumlawuli waseBaluchi waza wabuyela e-Agra ngoJuni ka-1659. I-Aurangzeb yambulala ngenxa yokuhlubuka ku-Islam waza wanikela intloko kuyise.
UShuja wabuye wabaleka waya e-Arakan ( eBurma ), waza wafa apho. Okwangoku, u-Aurangzeb wayenomnye u-Murad owayengummelwane wakhe wabulawa ngamacala okubulala abantu ngo-1661. Ngaphandle kokulahla bonke abazalwana bakhe abachasene naye, uMlawuli waseMughal wamisa uyise eboshelwe indlu e-Agra Fort.
U-Shah Jahan wahlala khona iminyaka eyisibhozo, kwada kwa-1666. Wachitha ixesha lakhe elalilele, ekhangela iifestile eTaj Mahal.
Ulawulo lwe-Aurangzeb lweminyaka engama-48 ludla ngokubizwa ngokuba ngu "Golden Age" weMbuso weMughal, kodwa yayinenkathazo kunye neengxabano. Nangona abalawuli bakaMughal bavela eAkbar Omkhulu nge-Shah Jahan babenomlinganiselo ogqithiseleyo wokunyamezela inkolo kwaye babe ngabaphathi abakhulu bezobugcisa, i-Aurangzeb yaguqula zombini le nkqubo. Wenza inkolelo ye-Islamist, engumgaqo-siseko nakwiminye imisebenzi ngo-1668. Ababini amaSulumane namaHindu babengavunyelwe ukucula, ukudlala izixhobo zomculo okanye ukudanisa - isitshixo esinzulu kwizithethe zombini nokholo eNdiya .
I-Aurangzeb nayo yalela ukutshatyalaliswa kweetempile zamaHindu, nangona inani elingaziwayo lingaziwa. Uqikelelo luqala ukusuka ngaphantsi kwe-100 ukuya kumawaka amawaka. Ukongezelela, walela ukugqilazwa kwabathunywa bevangeli abangamaKristu.
I-Aurangzeb yandise umbuso kaMughal emntla nasenzantsi, kodwa iinjongo zakhe eziqhubekayo zempi kunye nokunyamezelana kwezenkolo zazibeka ezininzi kwizifundo zakhe. Akazange anqikaze ukutshutshisa nokubulala amabanjwa emfazwe, amabanjwa ezombusazwe, kunye nabani na owayeyicinga ukuba yi-Islamic. Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, ubukumkani bube ngaphezu kwexesha, kwaye i-Aurangzeb yabekwa iirhafu eziphezulu ukuba ihlawule iimfazwe zakhe.
Ibutho likaMughal alizange likwazi ukunqumla ngokupheleleyo amaHindu ekumanyeni kwi-Deccan, kwaye amaSiks asempumalanga yePunjab avukela i-Aurangzeb ngokuphindaphindiweyo ngexesha lokulawula kwakhe.
Mhlawumbi unxungupheka kumlawuli wamagulghali, wayexhomekeke kakhulu kumaqhawe aseRajput , okwangoku ayenomqolo webutho lakhe elisemzantsi, kwaye ayenamaHindu athembekile. Nangona babengenelisekanga ngemigaqo yakhe, abazange bayeke i-Aurangzeb ngexesha lokuphila kwakhe, kodwa bavukela unyana wakhe ngokukhawuleza xa umlawuli wabulawa.
Mhlawumbi uvukelo olubi kakhulu lwalo lonke luyiNgqumbo kaPastun ka-1672-74. Umsunguli we-Mughal Dynasty, uBabur , wayevela e-Afghanistan ukuyisa iIndiya, kwaye intsapho yayisoloko ixhomekeke kubantu abanobuqili basePastun base-Afghanistan kunye nantoni na manje eyiPakistan ukukhusela imimandla esemantla. Imirhumo yokuba ugunyazwe nguMughal wayexhaphaza abafazi beentlanga babangela ukuvukela phakathi kwePasuns, okwakubangele ukuphazamiseka ngokupheleleyo kolawulo kummandla osenyakatho wembuso kunye neendlela zayo zokurhweba.
Ngomhla ka-Februwari 20, 1707, i-Aurangzeb eneminyaka engama-88 ubudala yafa ephakathi kweIndiya. Washiya umbuso woluliwe waya kwinqanaba kunye nokuvukela. Ngaphantsi kwonyana wakhe, uBhahadur Shah I, uMninimzi waseMughal waqala ukuhla kwexesha elide, elincinci ekugqibeleni, ekugqibeleni laphela xa iBritani ithumela umbusi wokugqibela ekuthunjweni ngo-1858 waza wamisa iBrithani eRain .
UMlawuli wase-Aurangzeb uthathwa njengowokugqibela we "Great Mughals." Nangona kunjalo, ukunyaniseka kwakhe, ubuqhetseba kunye nokunyamezela kuye kwabangela ukuba ubuthathaka bubukhosi obukade bukhulu.
Mhlawumbi amava ka-Aurangzeb okuqala ukuba athathwe ngumkhulu wakhe, kwaye uhlala ekhanyelwa nguyise wakhe wachaphazela ubuntu bakhe. Ngokuqinisekileyo, ukungabikho komgca okhankanywe ngokulandelelana akunakunceda ubomi bentsapho bube lula. Abazalwana kufuneka babekhulile bazi ukuba ngelinye ilanga bafanele balwe ngamandla.
Kwimeko nayiphi na into, u-Aurangzeb wayengumntu onesibindi owayesazi ukuba wayenokwenza ntoni ukuze aphile. Ngelishwa, ukhetho lwakhe luye lwashiya uMbuso weMughal ngokwaneleyo ukukwazi ukukhusela imperiyali yangaphandle ekupheleni.
Nciphisa uxinzelelo kunye nokuxhalabisa ngokudala ubugcisa